Weligaa Maqal Miyaa? Lix Cagood Ma Jirtaa? | Martech Zone
Michael wuxuu ku dhajiyay blog-ka bishii May, markii uu booqday Bandhigga CMS, in Diyaarad wuxuu ka mid ahaa raadadkii meeshaas. Diyaarad? Waa maxay Diyaarad? Waxaan dhawaan ogaaday…
Plone ayaa ka mid ah sare 2% dhammaan mashaariicda furan ee adduunka oo dhan, iyadoo 200 oo horumariyayaal ah iyo in kabadan 300 bixiyeyaasha xalka 57 dal. Mashruuca ayaa si firfircoon loo horumariyey tan iyo 2001, ayaa laga heli karaa in kabadan 40 luqadood, oo leh rikoodhka nabadgelyada ugu fiican ee CMS kasta oo weyn. Waxaa iska leh Plone Foundation, oo ah hay'ad aan faa'iido doon ahayn oo 501 (c) (3), waxaana loo heli karaa dhammaan nidaamyada hawlgalka waaweyn.
Plone waa nidaam maareyn kooban oo awood leh. Marka laga soo tago dhammaan astaamaha nidaamka maaraynta waxyaabaha caadiga ah, waxaa jira in yar oo runtii istaagay:
Miisaanka Weyn - maahan wax cusub in fulinta Plone ay yeelato boqollaal kun ama malaayiin bog ah. Tani waa wax aan la maarayn karin inta badan nidaamyada maaraynta maareynta.
Wadada iyo Ansixinta Custom - marinka ugu adag, habeynta iyo ansixinta si fudud ayaa loo fulin karaa. Macaamiisha shirkadaha, tani waa mid aad u awood badan.
Xawaare iyo Fudud - Plone si aan caadi aheyn ayuu ugu dhaqsaha badan yahay u adeegida boggaga isdhexgalka waa mid aad u fudud oo loo isticmaali karo celceliska isticmaalaha
Sida mashaariicda ugu badan ee furan, Plone maaha iyada oo aan lahayn beesheeda cajiibka ah ee soo-saareyaasha iyo soo-dejinta lagu daro. Waxaa jira ku dhowaad 4,000 kudar waxaa laga heli karaa keydka khadka tooska ah ee internetka si loo kordhiyo howlaha rakibiddaada - oo ay ka mid yihiin qorista qoraalka, khariidaynta, qulqulka shaqada, warbaahinta iyo qalabka bulshada.
Markii aan qoro qoraalo qoraaleed, marwalba waxay umuuqataa inuu jiro nooc xiriir Indiana ah. Plone kuma kala duwana. Calvin Hendryx-Parker waa xubin ka tirsan guddiga Aasaaska Plone oo wuxuu ku yaal halkan Fortville, Indiana. Xaaska Calvin, Gabrielle Hendryx-Parker ayaa aasaastay shirkadda, '1999 Feet Up', sanadkii XNUMX magaalada San Francisco waxayna u guureen shirkadda la-talinta caalamiga halkan Indiana. Gabrielle waxay kaloo MBA ku qaadatay Suuqgeynta iyo Hoggaaminta EM Lyon, France.
waxaan booqday Lix Cagood Up bishii hore waana la dhacay. Meelahooda xafiiska la dayactiray ee ku yaal bartamaha magaalada Fortville waa goob la yaab leh. Xitaa waxay leeyihiin xaruntooda xogta-yar oo u gaar ah oo leh matoorro keyd ah iyo rakibidda faybar si ay ula socdaan macaamiishooda rakibidda aasaasiga ah Xarumaha Xogta Nolosha. Waxay bixiyaan martigelin, horumarinta caadooyinka, adeegyada is-dhexgalka, waxayna dhisaan rakibidda Plone ee shirkadaha Sayniska Nolosha, Barashada Sare iyo ku dhowaad dhammaan warshadaha kale ee adduunka.
Lix Cagood Up ayaa dhawaan la shaaciyey SolrIndex 1.0, oo ah wax soo saar loogu talagalay Plone / Zope oo bixiya awooda raadinta ee kor u qaadista adoo adeegsanaya Xil, Mashruuca raadinta ganacsiga furan ee caanka ah ee laga helo mashruuca Apache Lucene. SolrIndex wuxuu la yimaadaa si deg deg ah oo awood u leh raadinta. SolrIndex waa la dheereyn karaa naqshadeynta, taas oo macnaheedu yahay inay awood u leedahay inay dhexgalaan tusmooyinka kale iyo buugaagta kale. Tani waa war wanaagsan oo loogu talagalay bogagga u baahan inay bixiyaan awoodaha raadinta ee ku yaal meelaha badan ee keydka ah.
Lixda Feet Up waxay hadda leeyihiin in kabadan 20 shaqaale waxayna sii wadeen koboc laba-god koritaan ah sanadba sanadka ka dambeeya tan iyo markii la bilaabay. Waa abaal u ah khibradda iyo taageerada ay siiyaan macaamiishooda. Lix Feet Up sidoo kale waxay maamushaa Plone Tune-Up Day… bil kasta, maalin dhan, dhacdo la taaban karo oo lagu caawiyo bulshada Plone.
Tags: hubkaasentimitirnidaamka maamulka contentnidaamyada maareynta contentcms waaweynkhariidayntasocodka warbaahintajaangooyolix fuudhshaqeynaya
Xeerka Ugu Muhiimsan Warbaahinta Bulshadda PR